ချစ်သူက တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်လာဖို့ ခေါ်လို့ သွားခဲ့ရာက . . ချစ်သူကို မတွေ့ရဘဲ . .သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ လူငယ်လေး - MM Live News
ချစ်သူက တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်လာဖို့ ခေါ်လို့ သွားခဲ့ရာက . . ချစ်သူကို မတွေ့ရဘဲ . .သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ လူငယ်လေး
သူဘယ္မွာေနလဲ ဘယ္ကလာလဲမသိဘူးရွင့္ …ကားဂိတ္မွာ လဲေနလို႔ အိမ္ေခၚလာတာပါ …..ေနမေကာင္းလို႔ ေဆး႐ုံပို႔ေပးတယ္ ….တက္နိုင္သေလာက္ အေပါင္းသင္းေတြနဲ႔ျပဳစုေပးတယ္ ….မနက္ကိုးနာရီေလာက္က်ေတာ့ မသက္သာလို႔ ျပန္ျပေပးတယ္…..
ေဆး႐ုံတင္ရမယ္ေျပာေတာ့ ကိုလဲဒီလိုျဖစ္မယ္မထင္လို႔ ဘယ္ကမွန္းေတာ့မသိဘူးဆရာရယ္ …..သူ႔ကိုသက္သာေအာင္ေဆးေလးထိုးေပးပါလား သက္သာရင္ လမ္းစရိတ္ေလး အလႉခံပီးျပန္လႊတ္မယ္ေပါ့ျပန္ေခၚလာတယ္….
ေနာက္ဆုံးမသက္သာေတာ့ ပရဟိတအဖြဲ႕နဲ႔ဆက္ပီး ေဆး႐ုံတင္တယ္ …..တစ္ခ်ိဳ႕ကကၽြန္မကိုတရားခံ စစ္သလို ေတြ ေမးလာတယ္ႏွလုံးေရာဂါလား အေမာဆို႔တာလား အစာဘဲျပတ္တာလား ရင္ကြဲနာက်တာလားဆိုတာေတာ့ ဟုတ္ကဲ့ ကၽြန္မဆရာဝန္မဟုတ္ဘူးရွင့္ ……
အဲ့ဒါေၾကာင့္ေဆး႐ုံပို႔ေပးတာပါေနာ္….ခုလိုတင္တာလဲ သူ႔မိသားစုနဲ႔အဆက္သြယ္ေလးမ်ားရမလားလို႔ ….ပီးေတာ့ ေခၚလိုက္တဲ့ေကာင္မသိေစခ်င္လို႔ပါ ကၽြန္မနဲ႔မဆိုင္ပါဘူး …..ကိုနဲ႔မသိတဲ့လူတစ္ေယာက္ကို လူသားခ်င္းစာနာလို႔ကူညီေပးတာပါ…
ဒါေပမယ့္ ကိုၿဖိဳးေလးေရ ရွင့္ကို ေအာ္လိုက္တဲ့အတြက ္စိတ္ထဲမွာ မေကာင္းဘူး ….မိန္းမတစ္ေယာက္အတြက္နဲ႔ ဘဝပ်က္ခံပီးလိုက္လာတဲ့ရွင့္ကို ကိုယ့္ေမာင္ေလးလို ဂ႐ုနာေဒါသနဲ႔ေအာ္လိုက္တာပါ ….နင္စဥ္းစားဉာဏ္ မရွိဘူးလား ဦးေႏွာက္မရွိဘူးလားလို႔ေျပာလိုက္မွိတယ္ …..
မႀကီးရယ္ ကၽြန္ေတာ့ကိုေအာ္လိုက္တာဗ်ာတဲ့ ….တကယ္စိတ္မေကာင္းဘူး ကိုၿဖိဳးေလးေရ….ဒါေတြက သူ႔ဆီက ေတြ႕ရတဲ့ ပစၥည္းေတြပါ. . .သူ႔ေကာင္မေလးအတြက္ နားကပ္လုပ္လာတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္….ဒါက သူ႔ရဲ့ အြန္လိုင္းေပၚက ခ်စ္သူပါ. . .
အဲ့ဒီ မိန္းမကလိုင္းေပၚမွာေတြ႕လို႔သူ႔ကို လာခဲ့ပါဆိုၿပီး ေခၚလိုက္တာ ….ဒီေရာက္ေတာ့ေေရွာင္ေနတယ္ ….ေကာင္ေလးက ဘယ္မွမသြားတက္ေတာ့ လမ္းမွာလဲေနတာနဲ႔အမတို႔ကေခၚပီး ေဆး႐ုံပို႔ထားတာ ဒီမနက္ဆုံးသြားပါၿပီပီ…..
ဒါက ေနာက္ဆုံး သူေရးခဲ့တဲ့ စာေလးပါ. . .
မိန္းမတစ္ေယာက္ကို ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ယုံၾကည္ရတာလဲ ေမာ္ေလးရယ္. . .ၿပီးေတာ့ အခ်စ္အတြက္နဲ႔ အသက္ေသရတာေတာ့ မတန္ဘူးလို႔ ေျပာခ်င္တယ္…..
ခုေတာ့ ကိုၿဖိဳးေလးဟာ ၇ရက္၁၁လ၂၀၁၉ စပ္စံထြန္းေဆး႐ုံတြင္ကြယ္လြန္သြားပါသည္ ….မိဘ ညီကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားမသိရပါ ….ေက်းဇူးျပဳ၍ share ေပးၾကပါ….။May La Min
သူဘယ်မှာနေလဲ ဘယ်ကလာလဲမသိဘူးရှင့် …ကားဂိတ်မှာ လဲနေလို့ အိမ်ခေါ်လာတာပါ …..နေမကောင်းလို့ ဆေးရုံပို့ပေးတယ် ….တက်နိုင်သလောက် အပေါင်းသင်းတွေနဲ့ပြုစုပေးတယ် ….မနက်ကိုးနာရီလောက်ကျတော့ မသက်သာလို့ ပြန်ပြပေးတယ်…..
ဆေးရုံတင်ရမယ်ပြောတော့ ကိုလဲဒီလိုဖြစ်မယ်မထင်လို့ ဘယ်ကမှန်းတော့မသိဘူးဆရာရယ် …..သူ့ကိုသက်သာအောင်ဆေးလေးထိုးပေးပါလား သက်သာရင် လမ်းစရိတ်လေး အလှူခံပီးပြန်လွှတ်မယ်ပေါ့ပြန်ခေါ်လာတယ်….
နောက်ဆုံးမသက်သာတော့ ပရဟိတအဖွဲ့နဲ့ဆက်ပီး ဆေးရုံတင်တယ် …..တစ်ချို့ကကျွန်မကိုတရားခံ စစ်သလို တွေ မေးလာတယ်နှလုံးရောဂါလား အမောဆို့တာလား အစာဘဲပြတ်တာလား ရင်ကွဲနာကျတာလားဆိုတာတော့ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်မဆရာဝန်မဟုတ်ဘူးရှင့် ……
အဲ့ဒါကြောင့်ဆေးရုံပို့ပေးတာပါနော်….ခုလိုတင်တာလဲ သူ့မိသားစုနဲ့အဆက်သွယ်လေးများရမလားလို့ ….ပီးတော့ ခေါ်လိုက်တဲ့ကောင်မသိစေချင်လို့ပါ ကျွန်မနဲ့မဆိုင်ပါဘူး …..ကိုနဲ့မသိတဲ့လူတစ်ယောက်ကို လူသားချင်းစာနာလို့ကူညီပေးတာပါ…
ဒါပေမယ့် ကိုဖြိုးလေးရေ ရှင့်ကို အော်လိုက်တဲ့အတွက ်စိတ်ထဲမှာ မကောင်းဘူး ….မိန်းမတစ်ယောက်အတွက်နဲ့ ဘဝပျက်ခံပီးလိုက်လာတဲ့ရှင့်ကို ကိုယ့်မောင်လေးလို ဂရုနာဒေါသနဲ့အော်လိုက်တာပါ ….နင်စဉ်းစားဉာဏ် မရှိဘူးလား ဦးနှောက်မရှိဘူးလားလို့ပြောလိုက်မှိတယ် …..
မကြီးရယ် ကျွန်တော့ကိုအော်လိုက်တာဗျာတဲ့ ….တကယ်စိတ်မကောင်းဘူး ကိုဖြိုးလေးရေ….ဒါတွေက သူ့ဆီက တွေ့ရတဲ့ ပစ္စည်းတွေပါ. . .သူ့ကောင်မလေးအတွက် နားကပ်လုပ်လာတယ်လို့ ထင်ပါတယ်….ဒါက သူ့ရဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်က ချစ်သူပါ. . .
အဲ့ဒီ မိန်းမကလိုင်းပေါ်မှာတွေ့လို့သူ့ကို လာခဲ့ပါဆိုပြီး ခေါ်လိုက်တာ ….ဒီရောက်တော့ေရှောင်နေတယ် ….ကောင်လေးက ဘယ်မှမသွားတက်တော့ လမ်းမှာလဲနေတာနဲ့အမတို့ကခေါ်ပီး ဆေးရုံပို့ထားတာ ဒီမနက်ဆုံးသွားပါပြီပီ…..
ဒါက နောက်ဆုံး သူရေးခဲ့တဲ့ စာလေးပါ. . .
မိန်းမတစ်ယောက်ကို ဘာကြောင့် ဒီလောက်ယုံကြည်ရတာလဲ မော်လေးရယ်. . .ပြီးတော့ အချစ်အတွက်နဲ့ အသက်သေရတာတော့ မတန်ဘူးလို့ ပြောချင်တယ်…..
ခုတော့ ကိုဖြိုးလေးဟာ ၇ရက်၁၁လ၂၀၁၉ စပ်စံထွန်းဆေးရုံတွင်ကွယ်လွန်သွားပါသည် ….မိဘ ညီကိုမောင်နှမများအားမသိရပါ ….ကျေးဇူးပြု၍ share ပေးကြပါ….။May La Min
ငပလီမြို့တွင် ဗုဒ္ဓဂါယာမှ မျိုးယူထားသော မဟာဗောဓိပင် ညောင်ပင်အကိုင်းအခက်မှ ထူးဆန်းသော ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်ပုံစံ ထွက်ပေါ်နေ
မိန်းမသားပဲဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်ဘူး…ဆိုပြီး ပိုက်ဆံအိပ်လုပြီး မောင်းပြေးတာ…အာဂမိန်းမနဲ့တွေ့သွားတဲ့ ငနဲသား…
ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် ကျင်းထဲပြုတ်ကျခဲ့သည့် ကျောက်တူးသမား အလောင်းအား လေးရက်မြောက်နေ့မှာ တွေ့ရှိ
ထင်းလုပ်ဖို့ ဝါးလုံးကိုခွဲလိုက်ရာမှ ဝါးလုံးအတွင်းမှ လူခြောက်အရုပ်ထွက်လာ